कम्युनिष्ट सरकार कस्तो हुनु पर्दथ्यो ? « Anumodan National Daily
कम्युनिष्ट सरकार कस्तो हुनु पर्दथ्यो ?
प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७६, शनिबार ११:४६
डिल्लीराज जोशी (डी सर)
अहिले अरु विषयसंगै यो सरकार कुन दर्शनमा आधारित सरकार हो ? के यो कम्यूनिष्ट सरकार हो ? कम्यूनिष्ट व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने बहस नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र र बाहिर चलेको छ । एकातिर देशभित्र का“ग्रेसहरू यो साम्यवादी वा कम्युनिष्ट सरकार नै भएकोले यसमा हा“स्न रुन पनि नपाइने र यो सरकार अधिनायकवादी भएको ब्याख्या गर्दै आएका छन् भने का“गे्रसका विदेशी सहधर्मी मित्र तथा साम्राज्यवादी, विस्तारवादी मुलुक र ब्यक्तिहरूले सरकारका सम्बन्धमा मौनता साधेका छन् । अर्कोतिर सरकार बाहिर रहेका कम्युनिष्ट विचार राख्ने समुह, दल तथा स्वतन्त्र ब्यक्तिहरू यो सरकार कम्युनिष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यहा“ त्यस सम्बन्धमा संक्षिप्तमा सैद्धान्तिक बहस चलाउन खोजिएको छ ।
प्रथमतः माक्र्सवादमा अन्तरनिहित बर्गसंघर्ष र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई वा सबैखाले विपन्नहरूको हितलाई कम्युनिष्टहरू प्रधान सवाल मान्दछन् । त्यसका लागि आफ्नै संगठन सरकार, सत्ता, सेना र सम्बन्ध आवशयक ठान्दछन् । कार्लमाक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले घोषणा गरेजस्तो सर्वहारा गरिब शोषित पीडित जनता, देश र संसारकै न्यायका लागि त निजी सम्पत्तिको न्यूनिकरण, नियन्त्रण वा अन्त्य हुनुपर्दछ निषेध हुनुपर्दछ र अन्याय नहुनका लागि सामुहिक हित हुने साझा सम्पत्तिको निर्माण आवश्यक हुुन्छ । कम्युनिष्टहरूको दूरदृष्टि राज्यबिहीन समाज, सेना, पुलिस, अड्डाअदालत वकिल कारागार नभएको र समान सहज सन्तुलित समुन्नत राज्य व्यवस्था हो । साम्यवादी दर्शन दृष्टि व्यवसार र विधि हो । यसको प्राप्ति गर्न दुनियाभरि संघर्ष चलिरहेको छ । त्यसका लागि गरिब मजदुर किसानको प्रतिनिधिको सचेत अग्रदस्ता अर्थात् कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार÷सत्ता आवश्यक हुन्छ । के नेकपासंग त्यस्तो सरकार छ ? के नेकपा सरकारको नेतृत्व वर्ग सम्पत्ति र संस्कृतिले ऊ कम्युनिष्ट भए वा नभएको प्रमाण दिदैन र ? यो सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न हो ।
व्यक्तिस्वार्थ र वर्गस्वार्थका लागि बलियोले कमजोर विरुद्धको संघर्षमा निजी सम्पत्ति पु“जी रुपैयापैसा प्राप्ति र संचिति गर्न नियमकानुन सत्ता प्रयोग गर्दछ । अर्थात् धन पु“जीले बर्ग उत्थान र पतनका लागि बर्गसंघर्ष हुन्छ र समाजमा बर्ग रहुञ्जेल कसैले चाहोस वा नचाहोस् संघर्ष निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने तथ्य माक्र्सवादको निष्कर्ष हो । त्यसैले माक्र्सले भनेका हुन्– मानव इतिहास भनेको संघर्षको इतिहास हो ।
निजि सम्पत्ति थुपार्ने होडसंगै समाजमा शोषण दमन अन्याय विभेद उचनिचको भावना र ब्यबहार सुरु हुन्छ । निजि सम्पत्तिकै जगमा राज्य र राजा, सत्ता र शासक उत्पत्ति भए । धनी र गरिब, शासक र शाषित, शोषक र शोषित, मालिक र नौकर बनाउने प्रकृया चल्यो । त्यसको गुण र दोषको स्तरमा बर्गसंघर्ष तेज र मत्थर हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ब्यबस्था र ऐतिहासिक भौतिकवादले पुष्टि गरेको सार्वभौम सत्य यहि हो । कहिले संघर्षको नतिजा न्यायप्रेमी देश र जनताको पक्षमा पर्छ त कहिलै युद्धपिपासु क्रुर शासक दलाल पुजिपतिहरूको पक्षमा जान्छ । तुलनात्मक रुपमा सत्ता कहिलै राम्रोको हातमा त कहिले नराम्रोको हातमा पर्छ, फरक यत्तिमात्र होे ।
विश्व र नेपालमा बर्गसंघर्ष अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । अन्तरविरोध भौतिक तथा समाज विज्ञानको शास्वत नियम हो– प्रत्यक्ष परोक्ष चलिरहेकै हुन्छ । गैरमाक्र्सवादी पुजिवादी संशोधनवादीहरूले जति कोकोहोलो मच्चाए पनि बर्गसंघर्ष सकियो, धन कमाउने दिन आयो, शान्ति समृद्धिको दिन आयो, संघर्ष सकियो, विकास मात्र बा“की छ भनेर जति भ्रमहरू छरुन्, ती सबै गैरमाक्र्सवादी बर्ग समन्वयवादी अवैज्ञानिक दृष्टिकोण हुन् । शान्ति, समृद्धि, सुख नवधनाड्य सत्तासीन बर्ग, त्यसका वरपर रहेका भारदारी दलाल पु“जिपतिहरूमा मात्र सिमित हुन्छ । विकासको प्रतिफल सर्वसाधारण जनताले पाउदैन । विकास सुखसमृद्धि बर्गसापेक्ष हुन्छ । किनकि सत्ता वर्गीय हुन्छ ।
कुनै न कुनै शोषण विना आवश्यकता भन्दा बढी वा फजुल सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिदैन, हुदैन । राज्यशक्ति सामाजिक शक्ति वा अन्य शक्ति बिना कसैले अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्न र त्यसको संरक्षण र भोग गर्न पनि सक्दैनन् । ललिता निवास वा बालुवाटार जग्गा प्रकरण र वाईड बडीमा संलग्न लगायत अन्य केहि नेता कार्यकर्ता तथा कर्मचारीहरूसंगको मौजुदा सम्पत्ति नै यो तथ्यको पुष्टि हो । परिश्रमले कमाएको सम्पत्ति अकुत हुने भए संसारका सबैभन्दा धनि किसान मजदुर हलिया कमैया भरिया ज्यामी सुद्ध पारिश्रमिक बुझ्ने निम्नतहका कर्मचारी शिक्षक हुन्थे होलान्, तर त्यसो भएको देखिदैन । बसिखानेहरू धनि छन् । यसकारण कि मेहनतकश जनताले कमाइदिएको सम्पत्तिमा उनिहरूको एकाधिकार छ । मेहनतकश मानिसहरू गरिब छन् । यसकारण कि उनिहरूको परिश्रमले मूल्यवान बनाइदिएको बस्तु सेवाको मुनाफामा स्वयं उनिहरूको हिस्सेदारी छैन । अर्थात् जो कमाउ“छ, त्यो पाउ“दैन । जो पाउ“छ त्यो कमाउ“दैन ।
नीतिगत हिसाबले यो उदार पु“जिवादी सरकार हो, कम्युनिष्ट होइन । नेपालको संविधान तथा नीति र विधि अन्तरगत गठन भएका माधव नेपाल, झलनाथ, बाबुराम, शेरबहादुर, पुष्पकमल दाहालको पूर्ववर्ति सरकारहरू कम्युनिष्ट सरकार थिएनन् । त्यस्तै खडकप्रसाद ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पनि उहि पुरानै प“ूजिवादी संसदीय विधान विधि नीति र सत्तासंयन्त्र अन्तरगत गठन भएकोले कम्युनिष्ट सरकार होइन । पार्टीभित्र केहि व्यक्तिहरूले कम्युनिष्ट विचार मन पराएको आधारमा सरकार वा सत्तालाई कम्युनिष्ट मान्न सकि“दैन ।
आर्थिक दृष्टिकोणले पनि वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट जस्तो देखि“दैन । दुई वर्षमा यसको अर्थनीति, योजना र बजेटले पञ्चायती तथा पु“जिवादी बहुदलीय व्यवस्थाको निरन्तरता र परम्परालाई अनुकरण गरेको छ । अर्थात् यो कपीपेष्ट अर्थनीति हो । सरकारको आर्थिक नीति धनीलाई झन् धनि र गरिबलाई झन् गरीब बनाउने पु“जीवादी अर्थतन्त्रको नीजि र उदारीकरणमा आधारित छ र यसको बजेटको संरचना र वितरण पु“जीवादी मोडेलको छ । त्यो बजेटले सानो हिस्सा पनि गरीबीको चक्रभित्र निसास्सिएकाहरूलाई दिनसकेको छैन । यसले समाज र देशलाई भन्दा व्यक्तिलाई, विपन्नभन्दा सम्पन्नलाई, गाउ“भन्दा सहरलाई पोस्छ । यो नियन्त्रित र योजनावद्धभन्दा स्वतन्त्र र छाडा बढि छ । यो अर्थनीतिले सत्तासीन , कुलिन, दलाल पु“जिपति, उच्चवर्ग, माथिल्लो तहका नेता, भूमाफिया, ठेकेदार र लालफिताशाही कर्मचारीहरूको हित गरेको छ । वर्तमान सरकारको अर्थनीति कम्युनिष्ट अर्थनीति हैन कि सामान्य उदारवादी प्रगतिशीलसम्म पनि छैन । धनी र गरिबसंग लिइने कर समान हुनु, तर लाभको वितरण असमान हुनु, एउटा कार्यालय सहयोगीसंग सम्पत्ति विवरण वर्षेनी मागिनु, नभए दण्ड गरिनु, तर सत्तामा बसेका नेताहरूले सम्पत्ति विवरण कहिल्यै कसैलाई बुझाउन नपर्ने ? यो कस्तो कम्युनिष्ट अर्थनीति हो ? सभासद विकास एजेन्ट हुन् कि नीतिनिर्माता हुन् ? सांसद विकास कोष भनेर करोडौ किन बा“डियो ? यी प्रतिधिमुलक उदाहरण मात्र हुन् ।
दिल्लीको दर्शनबिहीन आम आदमी पार्टीको सरकारको भन्दा यो सरकारको कार्यक्रम निरासाजनक छ । उसले गरिब झुग्गी झोपडीवालाको हित त गरेको छ नि । मानिसको दिनचर्या खुशिहाल आशलाग्दो बनाएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली पानी यातायात सेवा सुलभ र निःशुल्क गरेको छ । .तुलनात्मक रुपमा नेकपाको अर्थनीति र बजेटभन्दा धेरै प्रगतिशील छ ।
नेपालको वर्तमान प्रशासनिक सत्ता÷संयन्त्र शैलीले कम्युनिष्ट भावना समेट्दैन । राणाशासन, पञ्चायत र बहुदलीय प्रशासनिक संस्कार संयन्त्र र सभ्यताको निरन्तरता छ । यसले देश र कमजोर वर्गको सेवा र हित गर्दैन । जनपक्षीय देखिदैन न त यो कम्युनिष्ट विचार आदर्श दर्शनबाट प्रभावित र प्रशिक्षित प्रशासन नै हो । न त यो इमान्दार र प्रगतिशील छ्र । न त सेना जनसेना हो, न प्रहरी जनप्रहरी हो । न त तिनिहरू कम्यूनिष्ट आस्था राख्छन्, न आचरण । उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि कोही कम्युनिष्ट हैनन् । ती बढि कमाउनिष्ट हुन् भन्ने त अख्तियारको ललिता निवास र सुन तस्करीसंग जोडिएका ज्ञातअज्ञात नामहरूले पुष्टि गरिसकेको छ । कांग्रेसले वा स्वयं नेकपाले भनेजस्तो यो सरकारलाई कम्युनिष्ट मान्न सैद्धान्तिक रुपमा सजिलो छैन ।
कमसेकम सरकारले निम्न मध्यम तथा गरिब बर्गलाई शिक्षा स्वास्थ्य पानी यातायात निःशूल्क, सम्पत्तिको समान वितरण, प्रगतिशील कर निर्धारण, निम्न तहबाट उच्च पारिश्रमिक ज्याला निर्धारण वा श्रमिकलाई न्यायोचित पारिश्रमिक, गरिबीको रेखामुनिकालाई अनिवार्य रोजगारी, उत्पीडित वर्गलाई राज्यका निकायमा समावेश गरी गासबास कपासको ग्यारेन्टी सहित न्युनतम प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो । वर्गभेद देखिदैन वर्गहित, वर्गीयप्रेम, वर्गीय पक्षधरता र कार्यकर्ताउपर न्याय पनि यो नेकपा सरकारमा देखि“दैन । नेकपामा सामान्य नेता कार्यकर्ता चुनावको टिकट पाउदैनन् । पार्टीभित्र आन्तरिक वा बाह्य चुनाव लड्न र जित्न करोडौ रुपैया“को चलखेल हुन्छ । कामको हैन दाम र दलालीको मूल्यांकन हुन्छ । केन्द्रीयता छ, जनवाद छैन । चारैतिर नैरास्यता छ ।
कम्युनिष्ट कार्यकर्तालाई पोस्दैछ, यो कम्युनिष्टको बाटोमा अघि बढ्दैछ भन्ने का“ग्रेसी आरोप हो र प्रतिस्पर्धाको तुष्टिकरण मात्र हो । यदि यो आरोप सत्य हुन्थ्यो भने कम्युनिष्टका लागि त्यो भन्दा खुशिको कुरा अरु हुनै सक्दैनथ्यो । यदि पार्टी र सरकार साच्चिकै कम्युनिष्ट हुन्थ्यो भने का“ग्रेस शान्त निद्रामा सुत्दैनथ्यो । छिमेकि पेटभरी खादैनथ्यो । कम्युनिष्टको “क’ सुन्न र देख्न नचाहने का“ग्रेसका देशी विदेशी मित्रगणहरू यो सरकारलाई यतिबिघ्न स्नेह गर्ने थिएनन् र दुई वर्षमा स्थिति सिरिया इराक अफगान जस्तै हुन्थ्यो । विपरित वर्गले माया गर्नु भनेको के हो भन्ने कम्युनिष्ट विचार राख्नेहरूले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् ।
व्यवहार र अनुशासनका हिसाबले कम्यूनिष्टहरूको जीवन सादा सभ्य सुसंकृत र अनुशासित हुन्छ । बोल्सेविक अनुशासनका हिमायति हुन्छन् कम्युनिष्टहरू । कम्युनिष्टहरू नीजि जीवन नीजि आहारबिहार स्वार्थ, सम्पत्ति, सुरासुन्दरी र भोगविलासमा लिप्त हुदैनन् । मेनिफेस्टोमा उल्लेख भएजस्तो कम्युनिष्टहरूसंग पाउन जित्न संसार हुन्छ, हार्न हत्कडी मात्र हुन्छ । तर यहा गुमाउन सारा श्रीसम्पत्ति राजठाट एशोेआराम छ, जित्न केहि छैन । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आस्था राख्ने कम्युनिष्टहरू धार्मिक शोषण आडम्बर, रुढिवादिता, स्वर्ग नर्क, भाग्यवाद र अलौकिक शक्ति र भक्तिमा विश्वास गर्दैनन्, तर हाम्रा कम्युनिष्ट नेता मन्दिर गुम्बा चर्च मस्जिदमा टाउको ठोक्न र ठूलो बजेट हाल्न तल्लीन छन् । चिनिया राष्ट्र«पतिले समेत सरकारी कम्युनिष्टका नेताहरूको आनीबानी कम्युनिष्ट जस्तो नभएको र सुधार गर्नुपर्ने सुझाएर गएका छन् ।
केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको कतिपय राजनीतिक नेतृत्वमा यौनदुराचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, भड्किलो जीवनशैली देवत्वानुभूति ठेकदारी कमिशन मुनाफाखोरी पदलोलुपता चरम रुपमा देखिनु आफैमा लज्जास्पद घटना हुन् । कम्युनिष्टहरूको निजि सम्पत्ति नहुनु पर्ने हो, तर अहिले सबैभन्दा बढी सम्पत्ति कम्युनिष्ट नेताकार्यकर्तासंग छ भन्ने चर्चाले इमान्दार र त्यागी कम्युनिष्ट विचार राख्नेहरूले लाजले मुख छोप्नु पर्ने र लुक्नुपर्ने दिन आएको छ । वाइड बडि, सुन तस्करी, होलीवाइन, एनसिएल, यति, एमसीसी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि, त्रुटिपूर्ण सरकारी नक्सा, सिमा अतिक्रमण, लाचार कुटनीति, गरिब जनतामाथि थुपारिएको महंगायी र करको बोझ नेकपा सरकारका सम्झनै पर्ने उपहार हुन् ।
माथि उल्लेखित तथ्यहरू र दैनिक अभिब्यक्त जनप्रतिकृयाको विश्लेषणबाट यो सरकार सिद्धान्ततः कम्युनिष्ट नभएको राजनीतिका जानकारहरू निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । थप पुष्टिकरण सरकारको जिम्मेबारी हो । सदबुद्धि पलावस् हामीले यो सरकार कम्यूनिष्टै सरकार हो भन्न पाउँ ।